Imali edibeneyo yedijithali yokutyalomali ngo-2020. Iimali zemali zedijithali ezikhulayo ezikhulayo kunye nokuzinza okuphezulu (ubuncinci bezentathuko).
Iimali ezili-10 eziphezulu zeemali zedijithali zemigodi kunye nokuthenga, ngokukhula ngokunyuka kwixabiso lemarike yemali yedijithali kwiinyanga ezintathu zokugqibela.
Ukukhula ngokukhawuleza kwemali yedijithali
Ukukhula kwamaphesenti kwikota
Metaverse Entropy (ETP) 87.54 %
Binance Coin (BNB) 66.07 %
Qtum (QTUM) 46.03 %
ICON (ICX) 44.52 %
Lambda (LAMB) 28.84 %
BORA (BORA) 18.01 %
Huobi Token (HT) 16.14 %
Dogecoin (DOGE) 12.76 %
Dash (DASH) 0.45 %
Eyona nto ibalulekileyo ye-imali yedatha yimiqondo engaphantsi yomntu ngamnye otyalomali.
I-Cryptocurrensets emhlabeni isetyenziswa njengendlela yokutyala imali kunye nesixhobo sentlawulo, i-analog yeemali.
Eyona mali ilunge kakhulu njengemali, njengesixhobo sentlawulo esimiselweyo ngesantya sentengiselwano, ubuncinci bekhomishini okanye ukungabikho kwayo kwintengiselwano, inani labanini beewallet zeewallet, kunye nokulula kokutshintshana ngemali yangempela.
Eyona nto ibalaseleyo ye-imali yedatha njengendlela yotyalo-mali igqitywe kukuxhamla kwayo, ukukhula rhoqo kwenqanaba le-imali yedatha kunye nokuzinza kwenqanaba.
Inkonzo ye-ptptoratesxe.com Idijithali engcono kakhulu ibonakalisa eyona mali ilungileyo ye-crypto malunga notyalo-mali.
Silandelela amaxabiso otshintshiselwano kwi-Intanethi kuyo yonke i-crypto, utshintsho lweqondo lokutshintshiselana, ukuguquguquka, amandla okukhula kunye nezinye iiparameter ukuya kwinqanaba le-imali yedatha ezilungileyo kwihlabathi.
Itheyibhile yeyona mali ibalaseleyo ye-imali yedatha ibonisa i-3 ephezulu ye-crypto efanelekileyo yokutyalomali. Usebenzisa itafile yeyona ndlela ibalaseleyo ye-imali yedatha isimahla, ulwazi luhlaziywa kwi-intanethi.
Itshati yeyona nto ibalaseleyo ye-imali yedatha ikuvumela ukuba ubone imbali emfutshane yereyithi ekhethwe kwi-crypto ephezulu kakhulu. Kwigrafu yeyona crypto ibalaseleyo unokuvavanya uzinzo lokukhula kwemali kwaye uthathe isigqibo sokutyala imali kwi-imali yedatha efanelekileyo.
Ukukhula kwee-imali yedatha ziyi-cryptos, umyinge wazo sele ukhula ngokuhamba kwexesha.
Ukukhula kwe-Imali yedatha yimiba yesihlobo. Ixabiso lentengiso layo nayiphi na i-imali yedatha ethengiswa kwi-crypto-exchange lihlala litshintsha, liyanda kwaye lehla. Ke ngoko, kunokwenzeka ukuba uthethe malunga nokunyuka okanye ukwehla kwezinga lokutshintsha kwexesha elithile.
Kukho uqikelelo lwamanani awahlukeneyo okukhula kwe-imali yedatha. Kwinkonzo yethu Idijithali engcono kakhulu, sisebenzisa enye yeyona nto iqhelekileyo yokuqikelela ukukhula kwemali kwiinyanga ezi-3 ezidlulileyo.
Kukunyuka okuphezulu kwenqanaba le-crypto ngaphezulu kweenyanga ezi-3 esisivavanya njengolona nyuso luphambili kumgangatho we-imali yedatha.
I-Imali yedatha ine-voltility encinci.
I-Imali yedatha ine-voltility encinci - ezo i-cryptocurrensets ezinamanani atshintshisanayo anokuguquguquka okuncinci. Ngaphandle koko, i-imali yedatha ine-voltility encinci ingabizwa ngokuba yi-imali yedatha ngeyona ndlela yokuzinza yozinzo.
Ukuzinza okuncinci kufanelekile kutyalo mali olude. Ukuguquguquka okubukhali kwinqanaba lokutshintshiselana kwemali ye-cryptocur lwemali kuyo yonke inkuthazo yokuphembelela kunye nokungalindeleki.
Ukutyala imali kwii-imali yedatha ngokuzithemba okuncinci kufanelekile kutyalo-mali lwexesha elide.
Idijithali engcono kakhulu 2020
Eyona mali ilungileyo 2020 yinkonzo yasimahla ye-intanethi yewebhusayithi yethu ebonisa i-TOP ye-imali yedatha ngenqanaba lokutshintsha kwamaxabiso kunye nokuzinza okuncinci 2020.
Eyona nto ibalaseleyo ye-crypto ye 2020 uqikelelwa ngokusekelwe kuhlalutyo lweenyanga ezintathu ezidlulileyo. Sithelekisa ukukhula kwenqanaba lotshintshiselwano lwe-imali yedatha kunye nokuzinza kwayo okanye uzinzo kunye nokwakha umyinge kunye ne-TOP yeyona mali ibalaseleyo 2020.
Umgangatho weyona imali yedatha ilungileyo 2020 ihlanganiswa yonke imihla. Sebenzisa inkonzo yethu ukukhetha i-imali yedatha efanelekileyo yokutyalomali lwexesha elide.